लर्डबुद्ध कलेजको स्वामित्व न्युरोमा
विराटनगर । विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको विराटनरस्थित युनिभर्सल लर्डबुद्ध अन्तर्गत सञ्चालित लर्ड बुद्ध स्कूल र कलेजको स्वामित्व न्युरो अस्पताल विराटनगरले लिएको छ ।
लर्डबुद्धका अध्यक्ष नितिनचन्द्र गजुरेलले शनिबार प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको उपस्थितिमा न्युरो हस्पिटलका अध्यक्ष डा.विरेन्द्रकुमार विष्टलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
सोही कार्यक्रममा बिष्टको अध्यक्षतामा कार्यकारी निर्देशक अनिषा विष्ट र प्रबन्ध निर्देशक राजेश भट्टराई रहेको सञ्चालक समिति घोषणा भएको छ । कलेजका निवर्तमान अध्यक्ष नितिन गजुरेलले कलेजको सम्पूर्ण स्वामित्व तथा व्यवसायिक व्यवस्थापन सबल व्यवस्थापकीय क्षमता रहेको डा. विष्टको टिमलाई हस्तान्तराण गरेको बताउनुभयो ।
डा.विष्टले प्रदेश १ कै शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित लर्डबुद्ध कलेजको स्वामित्वले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको माध्यमबाट समाजमा योगदान पु¥याउने आफ्नो उद्देश्यले थप सार्थकता पाएको बताउनुभयो । कलेजका प्रबन्ध निर्देशक राजेश भट्टराईले लर्डबुद्ध कलेज शिक्षा क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेकोले कलेजको गरिमा तथा साखलाई आफ्नो नेतृत्वमा थप उचाइमा पु¥याउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिमिरेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ख्याति कमाएका डा.विष्टको टिमलाई शिक्षा क्षेत्रमा पनि सफलताको शुभकामना दिनुुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ, न्युरो अस्पतालका अस्पताल निर्देशक ई.रञ्जितराज बस्नेत, डा.रितिक विष्टसहितको सहभागिता थियो ।
डा.बिष्टको नेतृत्वमा न्यूरो कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल, मदर एण्ड चाइल्ड हस्पिटल, न्यूरो हेल्थ कलेजलगायतका अन्य संघ संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् ।
शनिबार, ०६ असार, २०७७, रातीको ०८:३६ बजे